ကုန်ကြမ်း Coluracetam အမှုန့် (135463-81-9) ထုတ်လုပ်သူ - Phcoker
ကုန်ကြမ်း Coluracetam အမှုန့်ဒြပ် nootropics ၏ racetam လူတန်းစား၏သစ်တစ်ခုနှင့်ထူးခြားသောအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ မူလကတစ်ဦးအဖြစ်ဖွံ့ဖြိုးပြီး ... ..
SKU: 135463-81-9 အမျိုးအစား: စမတ်မူးယစ်ဆေး
ကုန်ကြမ်း Coluracetam အမှုန့် (135463-81-9) ကဗီဒီယို
ကုန်ကြမ်း Coluracetam အမှုန့် (135463-81-9) S ကpecifications
ထုတ်ကုန်အမည် ကုန်ကြမ်း Coluracetam အမှုန့်
CAS အရေအတွက် 135463-81-9
InChIKey PSPGQHXMUKWNDI-UHFFFAOYSA-N ကို
မော်လီကျူး Formula C19H23N3O3
မော်လီကျူး Wရှစ် 389.4
အတိအကျ Mass 341.174 g / mol
အရောင် အစိုင်အခဲဟာ Off-White က Cyrstalline မှအဖြူ
Storage Temperature အခန်းအပူချိန်မှာ Store က
Coluracetam Application ကုန်ကြမ်း Coluracetam အမှုန့် (MKC-231) တစ်ဦး nootropic ဒြပ်ပေါင်းများဖြစ် purported တစ်ဒြပ် racetam မူးယစ်ဆေးဖြစ်ပါတယ်။
ကုန်ကြမ်းကုန်ကြမ်း Coluracetam အမှုန့် (135463-81-9) ဖျေါပွခကျြ
Coluracetam (MKC-231) တစ်ဦး nootropic ဒြပ်ပေါင်းများဖြစ် purported တစ်ဒြပ် racetam မူးယစ်ဆေးဖြစ်ပါတယ်။ လေ့လာရေးကသိမှတ်ခံစားမှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်တိုးမွှငျ့နိုငျကွောငျးအကြံပြုနှင့်အသုံးပြုသူများကိုကလည်းအာရုံစူးစိုက်မှု, အာရုံနှင့်ရူပါရုံကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်ပြောကြပါတယ်။
ရွေးချယ်မှတ်ဉာဏ် function.It အကျိုးသက်ရောက်စေတဲ့ choline လွှာမှ Enhancer အထူးဖန်ဆင်းသောအနေဖြင့် choline ပိုမိုထောက်ပံ့ခြင်းအားဖြင့် neurotransmitter acetylcholine ၏အဆင့်ဆင့်တိုးမြှင့်, High-ဆှဖှေဲ့ choline လွှာမှပိုကောင်းစေပါတယ်အဓိကအားအဖြစ် Coluracetam အမှုန့်ဆောင်ရွက်သည်။ acetylcholine အများဆုံးနီးကပ်စွာ memory နဲ့သိမှတ်ခံစားမှုနှင့်အတူဆက်စပ် neurotransmitter ဖြစ်ပါတယ်ကတည်းကဒီ function ကို coluracetam ရဲ့ nootropic capabilities. ၏အဓိကအရင်းအမြစ်တစ်ခုဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်နေသည်
Coluracetam အထူးသဖြင့်အစွမ်းထက်ဖြစ်ပါတယ်နှင့်အခြား racetam လူတန်းစား nootropics ထက်အများကြီးသေးငယ်ထိုးရန်လိုအပ်ပါသည်။ ဒါဟာစားသုံးမိ၏ 30 မိနစ်အတွင်းသွေးရည်ကြည်အတွက်မြင့်မားသောအဆင့်အတန်းရောက်ရှိမြန်ဆန်-သရုပ်ဆောင်ရဲ့, ဒါပေမယ့်သုံးနာရီအတွင်းအဆင့်ဆင့် decline. ၌ရှိကြ၏
ကုန်ကြမ်း Coluracetam အမှုန့် (135463-81-9လှုပ်ရှားမှု၏) ယန္တရား
Coluracetam acetylcholine နှုန်း-ကန့်သတ်ခြေလှမ်းဖြစ်သော High-ဆှဖှေဲ့ choline လွှာမှ (HACU), (ACH) ပေါင်းစပ်ပိုကောင်းစေပါတယ်။ လေ့လာရေး cholinergic neurotoxins ထိတွေ့ခဲ့ကြရာကြွက်မှပေးထားသောတစ်ခုတည်းပါးစပ်ထိုးအပေါ်ချို့ယွင်းသင်ယူခြင်းတိုးတက်လာဖို့ coluracetam အမှုန့်ပြသခဲ့ကြသည်။ နောက်ဆက်တွဲလေ့လာမှုများက choline Transporter စည်းမျဉ်းစနစ်ကပြောင်းလဲနေတဲ့အားဖြင့် cholinergic neurotoxin-ကုသကြွက်များတွင်ကြာရှည် procognitive သက်ရောက်မှုသွေးဆောင်စေခြင်းငှါပြသခဲ့ကြသည်။
အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ကုန်ကြမ်း Coluracetam မှုန့် (135463-81-9)
Coluracetam neurogenesis (အာရုံကြောဆဲလ်များကြီးထွားမှုကို) ကိုပံ့ပိုးစေခြင်းငှါ
Coluracetam schizophrenia ပြုမူဆက်ဆံကူညီပေးနိုင်ပါသည်
အကြံပြုကုန်ကြမ်း Coluracetam အမှုန့် (135463-81-9) သောက်သုံးသော
အသုံးပြုသူတုံ့ပြန်ချက်ကိုလည်း coluracetam အမှုန့်ဖို့သည်းခံစိတ်လျင်မြန်စွာဖွံ့ဖြိုးနိုင်မဖော်ပြခဲ့တဲ့သိရသည်။ အထူးသဖြင့်အားလုံးဆေးဝါးများ, nootropics နှင့်အတူကြောင့်သင့်ခန္ဓာကိုယ်ဓာတ်ပြုပြီးနှင့်ဆေးဝါးမှညှိအဖြစ်တဖြည်းဖြည်းသေးငယ်ဆေးများမှာဆေးထိုးတက်စတင်ရန်အကောင်းဆုံးပါပဲ။ Coluracetam Non-အဆိပ်အတောက်ဖြစ်ပြီးကောင်းမွန်စွာသည်းခံခြင်းနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံဖြစ်စဉ်းစားသည်။
ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး of Coluracetam အမှုန့် (135463-81-9)
Coluracetam အမှုန့်ကို non-အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေပါသည်။ ဒါကြောင့်ကောင်းစွာ-သည်းခံခြင်းနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံစဉ်းစားသည်။
ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးရှားပါးပေမယ့်စိုးရိမ်စိတ်, ပင်ပန်းနွမ်းနယ်, ခေါင်းကိုက်ခြင်း, ကွောနှင့်ပျို့ချင်ပါဝင်နိုင်ပါသည်။ တနည်းကား, ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမကြာခဏ nootropic ၏ထူးထူးခြားခြားမြင့်မားသောဆေးများ၏ရလဒ်ဖြစ်ပါသည်။
မကြာခဏလည်းမြင့်မားတစ်ဦး dose. နှင့်အတူ စတင်. ၏ရလဒ်ဖြစ်သော Coluracetam အစီရင်ခံစာပင်ပန်းနွမ်းနယ်အတော်များများဟာပထမဦးဆုံးအချိန်အသုံးပြုသူများသည်
ကုန်ကြမ်း J-147 အမှုန့် (1146963-51-0)
ကုန်ကြမ်း J-147 အမှုန့် ...... အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါနှစ်မျိုးလုံးဆန့်ကျင်အစီရင်ခံသက်ရောက်မှုနှင့်အတူစမ်းသပ်မူးယစ်ဆေးဖြစ်ပြီးအရှိန်အဟုန်မြှင်၏ mouse ကိုမော်ဒယ်များအတွက်အိုမင်း ..
စွမ်းဆောင်ရည်: 1150kg / လ
ကုန်ကြမ်း Hydrafinil (9-Fluorenol) အမှုန့် (1689-64-1)
Modafinil оfအားကောင်းတဲ့ Analog စ nootropic ဖြည့်စွက်іѕ Hydrafinil အမှုန့်။ လည်းလူသိများ Hydrafinil ... ..